शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ DeFi Coins मार्केट क्यापिटलाइजेशन जून २०२१ | DeFi Coins शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ DeFi Coins - Deficoins.io
लपेटिएको बिटकॉइन समीक्षा
Yearn वित्त समीक्षा
आधारभूत ध्यान टोकन समीक्षा
कर्भ DAO टोकन समीक्षा
हाम्रो टोकन किन्नुहोस्
शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ DeFi Coins
विकेन्द्रीकृत वित्त (डीईएफआई) बजारले हालका वर्षहरूमा क्रिप्टो-उत्साहीहरूबाट अझ बढी ब्याज लिएको छ - जुन विश्वभरिका सबै लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यसको सरल रूपमा, डेफी एक शब्द हो जुन ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा निर्मित वित्तीय अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ - जुन केन्द्रीकृत संस्थानहरूलाई बदली गरेर आर्थिक परिदृश्यलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
आज, डेफिफाई प्लेटफर्मले तपाईंलाई वित्तीय सेवाहरूको पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान गर्न सक्छ - ट्रेडिंग, उधारो, ndingण, विकेन्द्रीकृत एक्सचेन्ज, सम्पत्ति व्यवस्थापन, र अधिकबाट।
सब भन्दा लोकप्रिय DeFi प्लेटफार्महरु आफ्नो आकृति टोकन को डिजाइन गरीएको छ, एक उपकरण को रूप मा आफ्नो संचालन को सुविधा को साथै प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन। यदि तपाईं यस नवीन बजारको चाँडै प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने - डेफाइ सिक्कामा लगानी गर्नु उत्तम मार्गहरू मध्ये एक हो।
यहाँ DefiCoins.io - हामी बजार मा केहि उत्तम DeFi सिक्का मा एक नजर लिन्छौं र सम्बन्धित DeFi इकोसिस्टम भित्र तिनीहरूको भूमिका अध्ययन। हामी कसरी ब्रोकरेज शुल्क वा कमीशनमा एक प्रतिशत तिर्नु बिना तपाईको घरको आरामबाट डेफि सिक्का किन्न सकिन्छ भन्ने प्रक्रियाको व्याख्या गर्दछौं।
हाम्रो शीर्ष ब्रोकरको साथ DeFi Coins खरीद गर्नुहोस्
१० सर्वश्रेष्ठ डिफाइ सिक्का २०२१
बढ्दो लोकप्रियता र नयाँ DeFi प्लेटफर्मको उदयको लागि धन्यवाद - DeFi सिक्काको सूची निरन्तर बढ्दैछ। लेखनको समयमा - सम्पूर्ण डेफिफाई उद्योगको कुल बजार क्याप ११$ अर्ब डलर भन्दा बढी छ। यो विशाल छ, विशेष गरी जब तपाईं DeFi घटना कती युवा विचार गर्नुहुन्छ।
यहाँ १० सर्वश्रेष्ठ DeFi सिक्काको सूचि छ जुन यस विकेन्द्रीकृत बजारको वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँदछ।
१. Uniswap (UNI)
Uniswap एक प्रमुख विकेन्द्रीकृत विनिमय हो जुन हाल DeFi बजारमा प्रभुत्व जमाइरहेको छ। यसले एक स्वचालित मार्केट मेकर प्रणाली (एएमएम) प्रयोग गर्दछ कि यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि त्यहाँ यसको साइटमा ट्रेडिंग ERC20 टोकनहरूको लागि पर्याप्त तरलता छ। Uniswap प्रोटोकोल यसको क्रिप्टो सम्पत्ति समाधान अनुसार एक वफादार निम्न आकर्षित गर्दछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको निजी कुञ्जीहरू मा पूर्ण नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, बाह्य वालेटसँग एकीकृत गर्दछ, र तपाइँलाई कम शुल्कमा व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।
UNI टोकन युनिस्वाप प्रोटोकल द्वारा सेप्टेम्बर २०२० मा सुरू गरिएको थियो - यसको उपयोगकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमको रूपमा। DeFi सिक्का market २.2020 of को व्यापार मूल्यमा बजारमा प्रवेश गर्‍यो। केही महिनाको अवधिमा - सिक्काको मान पछि $$.2.94$ डलरमा पुगेको छ। DeFi सिक्का यथोचित रूपमा उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन टोकन मान्न सकिन्छ - मात्र आठ महिना को एक मामला मा 35.80% को वृद्धि संग।
यो पनि १ of अरब डलर भन्दा बढीको मार्केट क्यापको साथ मूल्या of्कनको सन्दर्भमा एक उत्तम डेफाइ सिक्का मध्ये एक हो। जब तपाईं UNI खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईंले Uniswap प्रोटोकलमा प्रोत्साहन र छुटहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, UNI होल्डिंग को आकार को आधार मा - तपाइँ Uniswap पारिस्थितिकी प्रणाली को लागी प्रस्ताव गरीएको विभिन्न नीतिहरु मा मतदान गर्न सक्षम हुनु हुनेछ।
युनिस्वाप प्रोटोकल पहिले नै यसको युएनआई टोकन बाँडफाँडका लागि चार बर्षे योजनाको साथ आएको छ। कुल १ अरब सिक्का मध्ये, 1०% Uniswap समुदाय सदस्यहरूको लागि आरक्षित छ। डेफि सिक्का पहिले नै लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी प्लेटफर्महरू जस्तै क्यापिटल.कटमा ट्रेड गर्नका लागि उपलब्ध छ।
अब Uniswap खरीद गर्नुहोस्
Cha. चैनलिंक (लिंक)
चैनलिंक यथार्थ रूपमा सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने विकेन्द्रीकृत ओरकल नेटवर्क वर्तमानमा डेफिफा बजारमा उपलब्ध छ। यसले ब्लकचेनमा स्मार्ट ठेकाको लागि वास्तविक-विश्व डाटा फीड गर्दछ - क्रिप्टो DApps को बीच पछाडि र पछाडि जान जान्ने अभूतपूर्व मात्राको बीचको लिंकको रूपमा सेवा गर्दै। प्रदायकले यसकै आफ्नै मूल टोकन LINK पनि जारी गरेको छ, जुन प्लेटफर्ममा धेरै कार्यात्मक उपयोगिताहरू छन्।
विकेन्द्रीकृत प्लेटफार्मको बढ्दो लोकप्रियताका लागि धन्यवाद, चिनलिंकले २०१ in मा शुरू भएदेखि यता उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ। यो त्यस्तो बिन्दुमा विकसित भएको छ जहाँ यसले अन्य क्रिप्टो पहलहरूलाई लगानी गर्न सक्दछ जुन चैनलिंक इकोसिस्टमको लागि मूल्यवान हुन सक्छ।
बजार क्यापिटलाइजेशनको सर्तमा, लि्क एक क्षणको लोकप्रिय डेफिफाई सिक्का हो - १$ अरब भन्दा बढीको मूल्यमा। DeFi सिक्का २०२१ मा प्रवेश भयो $ १२.१14 को मूल्यको साथ। लेख्ने समयमा, २०२१ अप्रिलमा - लिंकको मान since .2021$.12.15 मा सबै समयको उच्च हिट भयो। धेरैले आशा गर्दछ कि यस अपगर्भ मार्गलाई समयको क्रम जारी रहन्छ।
वर्षौंको अवधिमा, चैनलिंक एक उत्कृष्ट डेफि प्लेटफार्म हो जुन उद्योगमा यसको प्रासंगिकता कायम गरेको छ। जस्तो कि यसले यसको डेफाइ प्लेटफर्मको कार्यक्षमता विस्तार गर्ने देखिन्छ, LINK अन्य डेफिफा विकासकर्ताहरूलाई थप लचिलोपन प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ। यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै, लिंक टोकन 2021 मा विचार गर्नका लागि एक उत्तम डेफाइ सिक्का हो।
अब Chainlink खरीद गर्नुहोस्
D. DAI (DAI)
अनजान भएकाहरूका लागि, क्रिप्टोकरन्सीहरू र डेफि फाइ सिक्काको वैकल्पिक वित्तीय बजार प्रसिद्ध अस्थिर छ। जो मानिस मूल्यको उतार चढावबाट बच्न खोज्दैछन्, DAI सिक्का चासो लाग्न सक्छ। संक्षेप मा, यो DeFi क्राइप्टो सिक्का Ethereum blockchain मा निर्मित छ र यसको मूल्य अमेरिकी डलर को लागी बनाइएको छ।
वास्तवमा, DAI पहिलो विकेन्द्रीकृत, संपार्श्विक-समर्थित क्रिप्टो सम्पत्ति हो जुन यसको प्रकारको हो। यो DeFi सिक्का खुला स्रोत सफ्टवेयर MakerDAO प्रोटोकल द्वारा विकसित गरिएको छ - जुन एक उत्कृष्ट DeFi प्लेटफर्म हो स्मार्ट समझौता प्रयोग गर्न विभिन्न विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्न।
वर्तमानमा, DAI को billion अर्ब डलरको बजार पूंजीकरण छ - यसले सर्कुलेसनमा एक उत्तम DeFi सिक्का बनाएको छ। योसँग एक विनिमय दर छ कि अमेरिकी डलरको मूल्यलाई अन्य फिएट मुद्राको तुलनामा दर्पण गर्दछ। जैसा कि तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, डीएआई स्ट्याकि ofको मुख्य फाइदा भनेको तपाईंको जोखिमको फराकिलो क्रिप्टोकरन्सी बजारहरूको चरम अस्थिरतामा सीमित गर्नु हो।
थप रूपमा, फिएट मुद्राको सट्टा DAI को प्रयोगले तपाईंलाई लेनदेन लागत कम गर्न मद्दत गर्दछ र वित्तीय बजारमा ट्रेडिंग गर्दा सम्बन्धित ढिलाइहरू। अन्तमा, DAI यसको प्रकारको सब भन्दा राम्रो DeFi सिक्का हो - त्यसैले हामी यस परियोजनाको लागि ठूला चीजहरूको आशा गर्छौं जुन आउँदो वर्षहरूमा जान्छ।
DAI अब खरीद गर्नुहोस्
4. ०x (ZRX)
०x एक डेफि प्रोटोकोल हो जसले विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्जहरू निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। यसले गैर कस्टोडियल DEX समाधानको रूपमा पनि कार्य गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलै ERC0 टोकनहरू व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि उल्लेखनीय भिन्नता यो हो कि ERC20 टोकनहरूको लागि यसको समर्थनको साथ, ०x एक्सचेन्जले ERC-20 क्रिप्टो सम्पत्तिलाई पनि सजिलो बनाउँदछ। अर्को शब्दहरुमा, यसले डिजिटल सिक्काको बृहत स्पेक्ट्रमको अनुमतिहीन व्यापारको लागि ठाउँ बनाउँदछ।
२०१ 2017 मा, खुला स्रोत ०x प्रोटोकलले ०x (ZRX) सिक्का प्रस्तुत गर्‍यो। अन्य धेरै शीर्ष डेफाइ सिक्काहरू जस्तै, ZRX सिक्का पनि Ethereum blockchain मा चल्छ र मूलतः यसको इकोसिस्टमलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दतको लागि गरिएको थियो। यद्यपि, २०१ - मा - ०x सिक्कालाई अधिक उपयोगिताहरू, जैसे तरलता प्रदायकहरूको लागि क्षमता राख्ने क्षमता तोकिन्थ्यो।
०x ले २०२१ को शुरुआतदेखि धेरै राम्रो प्रदर्शन गरिसक्यो। वास्तवमा, डेफिफाई सिक्का पछि value००% भन्दा बढि बढेको छ - अप्रिल २०२१ मा २.0 डलरको उच्च समयसम्म पुगेको छ। टोकनले वर्तमानमा १.२ बिलियन डलरभन्दा बढीको बजार पूंजीकरण राखेको छ। । यदि तपाईं ०x प्रोटोकल पहुँच गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं यो डेफिफा टोकन दुबै केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफर्मबाट ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ - जस्तै रेगुलेटेड ब्रोकर क्यापिटल डॉट कॉम।
०x अब खरीद गर्नुहोस्
२. निर्माता (MKR)
मेकर (MKR) अर्को DeFi सिक्का हो जुन टोलीले मेकरडाओ प्रोटोकलमा विकसित गरेको थियो। जबकि डीएआई स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले थियो, निर्माता सिक्काको उद्देश्य उपयोगिता टोकनको रूपमा सेवा गर्नु हो। वास्तवमा, MKR DeFi टोकन DAI को मान $ १ मा स्थिर राख्न प्रयोग गरीन्छ। यो प्राप्त गर्नका लागि, बजारमा पाइने मूल्यको उतार चढावलाई सन्तुलनमा राख्न सिक्का सिर्जना गर्न र नष्ट गर्न सकिन्छ।
MKR का धारकहरू DAI स्थिरतासम्बन्धी निर्देशनहरू मिलाउनका लागि जवाफदेही छन्। यदि तपाइँ मेकरमा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईले मेकरडिएओ इकोसिस्टम भित्र मतदान अधिकार प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यसबाहेक, तपाईं सिर्जनाकर्ता ओडिओ प्रोटोकलको प्रशासनमा सहभागीको लागि बदल्न प्रोत्साहनहरू पनि प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, जस्तै कम फीस र अनुकूल ब्याज दरहरू। Billion अर्ब डलर भन्दा बढीको मार्केट क्यापको साथ, निर्माता क्रिप्टो बजारको शीर्ष १० डेफाइ सिक्का मध्ये एक हुन्। यदि DAI ले क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने हो भने यसले निर्माता डेफाइ सिक्काको मूल्यमा पनि असर गर्न सक्छ।
अब निर्माता खरीद गर्नुहोस्
२१. कम्पाउन्ड (COMP)
कम्पाउन्ड अर्को प्रमुख विकेन्द्रीकृत orrowण र उधारो प्लेटफर्म हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको क्रिप्टो सम्पत्तिमा ब्याज आर्जन गर्न सक्षम गर्दछ। मञ्चले यस उद्देश्यका लागि धेरै कम्पाउन्ड तरलता पूलहरू डिजाइन गरेको छ। एकचोटि तपाईंले त्यस्तै एउटा पोखरीमा तपाईंको सम्पत्ति जम्मा गर्नुभयो, तपाईं बदलामा cTokens उत्पन्न गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
जब तपाईं आफ्नो सम्पत्तिमा पहुँच प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईं यी सी टोकनहरू रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष रूपमा, किनकि cTokens को विनिमय दर समय संग बढ्छ, तपाईं पनि आफ्नो लगानी मा ब्याज कमाउन मा सक्षम हुनेछ। जुन २०२० मा, कम्पाउन्डले आफ्नो मूल टोकन - COMP शुरू गर्‍यो। यस DeFi टोकन धारकहरूले कम्पाउन्ड प्रोटोकलमा मतदान अधिकारमा पहुँच पाउन सक्दछन्।
प्लेटफर्मले बजारमा धेरै ट्र्याक्सन प्राप्त गरिरहेको छ, र यसको डेफाइ सिक्काले हालसालै market अर्ब डलरभन्दा बढीको बजार पूंजीकरण पार गर्यो। कम्पाउन्ड २०२१ मा entered १3० को मूल्यमा प्रवेश भयो। त्यसबेलादेखि, डेफी सिक्का $$2021 को पार भयो। यसको मतलब केवल चार महिनाको ट्रेडिंगमा - कम्पाउन्डको मानमा 143.90 638०% ले वृद्धि भयो।
अब कम्पाउन्ड किन्नुहोस्
Ave. Aave (AAVE)
Aave एक खुला स्रोत DeFi प्लेटफर्म हो कि एक crypto उधारो सेवा को रूप मा कार्य गर्दछ। यसको गैर-कस्टोडियल तरलता प्रोटोकलले तपाईंलाई ब्याज कमाउनका साथै तपाईंको क्रिप्टो सम्पत्तिहरूमा orrowण लिन अनुमति दिन्छ। यो DeFi प्लेटफर्म पहिलो पटक २०१pt मा क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
जे होस्, त्यो समयमा - प्लेटफर्मलाई ETHLend भनिन्थ्यो, LEND यसको मूल टोकनको रूपमा। यसले मुख्य रूपमा ndणदाता र orrowण दिनेहरूलाई जडान गर्न म्याच-मेकिंग प्रणालीको रूपमा काम गर्‍यो। २०१ In मा, डेफि प्लेटफर्मको नाम Aave राखियो - नयाँ ndingण दिने कार्यहरूमा थपिँदै।
आज, AAVE सिक्का यसको सुरक्षा र प्रदर्शनमा योगदान दिन प्रोटोकल मार्फत स्ट्याक गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, तपाईं Aave प्लेटफर्ममा स्ट्याकिंग पुरस्कारहरू र छुट शुल्कहरू पनि रमाउन सक्नुहुन्छ। DeFi सिक्काका धेरै बिक्री बिन्दुहरू छन् - किनकि यसमा बढ्दो भीड क्रिप्टो ndingण बजारमा वास्तविक विश्व उपयोगिताहरू छन्।
यो of अर्ब डलर भन्दा बढीको बजार पूंजीकरणको साथ, मूल्यांकनको हिसाबले यो शीर्ष डेफाइ सिक्का मध्ये एक हो। AAVE DeFi सिक्का २०२१ को शुरुदेखि नै तेजीको बजारमा रमाउँदै छ - चार महिनामा यसको मूल्यमा5over०% ले वृद्धि भई।
Aave अब खरीद गर्नुहोस्
१।। Synthetix (SNX)
Synthetix आजको बजारमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने डेफाइ प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। यो एक राम्रो तेल भएको विकेंद्रीकृत विनिमयको पछाडि छ जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई प्लेटफर्ममा टोकनहरू स्वैप गर्न अनुमति दिन्छ। जे होस्, के Synthetix लाई अद्वितीय बनाउँदछ कि यसले उपयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै सिंथेटिक सम्पत्तिमा पुदीना गर्न अनुमति दिन्छ - जसलाई 'Synths' भनिन्छ। सरल शब्दहरुमा, Synths वित्तीय उपकरण हो कि एक अन्तर्निहित सम्पत्ति को मूल्य ट्रैक।
तपाईं क्रिप्टो करन्सीहरू, सूचकांकहरू, र अन्य वास्तविक-विश्व सम्पत्तिहरूको लागि सिन्थेक्सको विकेन्द्रीकृत विनिमयमा सुन जस्ता व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, तपाईं SNX हुन आवश्यक छ - Synths को विरुद्ध जमानत प्रदान गर्न Synthetix को मूल टोकन। यस तरिकाले, जब तपाईंको ट्रेड Synths, तपाईंको SNX टोकन स्मार्ट सम्झौता मा लक हुनेछ।
थप रूपमा, SNX टोकनले संकलित शुल्कको एक अंश यसको धारकहरूलाई वितरण गर्दछ, तपाईंलाई निष्क्रिय आय कमाउन अनुमति दिदै। प्लेटफर्मको भित्र यो वैध उपयोगितालाई ध्यानमा राख्दै, SNX टोकनहरूको माग बढ्न जारी रहन सक्छ। टोकन पहिले नै एक उत्तम डेफाइ सिक्काको रूपमा देखा पर्‍यो, २ अर्ब डलर भन्दा बढीको बजार पूंजीकरणको साथ। पछिल्ला चार महिनाको अवधिमा, SNX सिक्काको मूल्य पहिले नै मूल्यमा १२०% ले वृद्धि भएको छ।
Synthetix now खरीद गर्नुहोस्
Year। Yearn.finance (YFI)
Yearn.finance २०२० को शुरुमा सुरू गरिएको थियो, ईथरियम, स्थिरकोइन्स, र अन्य altcoins स्ट्याकिंगका लागि उच्च उत्पादन प्रदान गर्ने उद्देश्यले। प्रोटोकलले यसको सुविधालाई 'भोल्ट्स' भनिन्छ जुन ईथरियम लेनदेनको उच्च लागत कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Yearn.finance नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि DeFi को अवधारणा सरल बनाउन आशा गर्दछ, तिनीहरूलाई न्यूनतम हस्तक्षेपको साथ फिर्ताको अनुकूलन गर्न अनुमति दिदै। यस डेफाइ प्लेटफर्मले आफ्नो YFI टोकनको सुरूवातसँगै बजारबाट थप ध्यान आकर्षण गरेको छ। DeFi सिक्काको market १. billion बिलियन भन्दा बढीको बजार क्याप छ।
यद्यपि त्यहाँ केवल, 36,666 सिक्का सीमित कुल आपूर्ति छ - जसले डेफी प्रोजेक्टको मूल्यमा थप गर्दछ। लेख्ने समयमा, वाईएफआई सिक्का $ $२,42,564। भन्दा बढि मूल्य छ - यो बजारमा सब भन्दा उच्च हो। यो एक प्रभावशाली व्यक्ति हो, यो सिक्का जुलाई २०२० मा मात्र प्रस्तुत गरिएको थियो - considering १,०2020० को मूल्यमा।
अब Yearn.finance खरीद गर्नुहोस्
१०. PancakeSwap (Cake)
PancakeSwap एक विकेन्द्रीकृत विनिमय हो कि तपाईं बिनान्स स्मार्ट चेन मा BEP20 टोकन स्वैप गर्न अनुमति दिन्छ, Ethereum को सुविधाजनक र सस्तो विकल्प। Uniswap को समान, यस DEX ले तरलता पूलहरू उत्पन्न गर्न स्वचालित मार्केट मेकर प्रणाली पनि प्रयोग गर्दछ। पेनकेस्वापले सेप्टेम्बर २०२० मा यसको मूल टोकन केक सुरू गर्‍यो। प्रयोगकर्ताहरूले धेरै टोकनहरू कमाउनको लागि प्रस्ताव गरिएको धेरै तरलता पोखरीहरूमध्ये एउटामा केकलाई हिस्सेदारी गर्न सक्दछन्।
कम शुल्कले यस प्लेटफर्ममा धेरै डेफाइ उत्साहीहरूलाई आकर्षित गर्यो। - सिक्काको मूल्य स्थिर रूपमा माथि सार्दै। केक टोकनले २०२१ को पहिलो क्वार्टरमा उल्लेखनीय मूल्यको रैली प्रदर्शन गर्‍यो। डेफी सिक्काले वर्ष ०..2021 डलरमा शुरू गरेको थियो र अप्रिल २,, २०२१ मा-...0.63$ को एक सबै समयको उच्च हिट भयो।
यसले केवल चार महिनामा 5,000,०००% भन्दा बढीको लाभमा अनुवाद गर्दछ। लेखनको समयमा, केक टोकनले billion अर्ब डलर भन्दा बढीको बजार पूंजीकरण पनि स्थापित गरेको छ, जुन यो वर्षको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्ने डेफि फाइ क्रिप्टो टोकनमध्ये एक हो।
भन्नु आवश्यक छैन, डेफि फाइ सिक्काको बढ्दो लोकप्रियताले स De्केत गर्दछ कि फराकिलो डेफी क्षेत्र व्यापक वित्तीय बजारमा पुग्ने क्रममा छ। हामीले यहाँ सूचीबद्ध गरेका प्रोटोकोलहरूले देखाउँदछ कि सम्बन्धित उत्पाद र सेवाहरूको ग्लोबल बजारमा वास्तविक माग, र कोठा छ।
त्यो भनियो, त्यहाँ धेरै प्रचलनहरू छन् जुन यस सफलतालाई योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। उदाहरण को लागी, DeFi टोकन फराकिलो DeFi इकोसिस्टमको केवल एक पक्ष हो। वास्तवमा, यी विकेन्द्रीकृत प्रोटोकललाई समर्थन गर्ने माध्यमको रूपमा विकसित भइरहेको छ - जसले तपाईंलाई डेफि घटनामा क्यापिटलाइज गर्नका लागि अन्य धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
त्यो दिमागमा राख्दै, हामी केहि राम्रा DeFi प्लेटफर्महरू अन्वेषण गरौं जुन आज बजारले प्रभुत्व जमाइरहेका छन्।
PancakeSwap अब खरीद गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ DeFi प्लेटफार्म 2021
डेफी प्लेटफार्मको मुख्य उद्देश्य भनेको लगानी र ट्रेडिंग प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण गर्नु हो। यहाँको केन्द्रीय आकर्षण मध्ये एक हो कि यी समाधानहरूले परम्परागत वित्तीय संस्थाको तुलनामा उच्च पारदर्शिता प्रदान गर्दछ।
आजको सर्वश्रेष्ठ DeFi प्लेटफर्महरू dApps वा विकेन्द्रीकृत प्रोटोकल द्वारा संचालित छन् - या त बिटकॉइन वा Ethereum मा निर्मित। बजारमा लगभग मासिक रूपमा प्रवेश गर्ने नयाँ परियोजनाहरू छन्, सबै आकार र आकारका लगानीकर्ता र व्यापारीहरूलाई नयाँ वित्तीय अवसर प्रदान गर्दै।
यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन dApps र विकेन्द्रीकृत प्रोटोकल आज प्रयोग भइरहेको छ:
उधारो र :ण: DeFi प्लेटफर्मले तपाईंलाई तपाईंको क्रिप्टो सम्पत्तिमा loanण लिनको लागि अनुमति दिन्छ, तपाईंले केवाईसी प्रक्रिया पूरा नगरीकन, तपाईंको क्रेडिट जाँच गरेको छ, वा बैंक खाताको स्वामित्वमा पनि छ। तपाईले तपाईको क्रिप्टोकुरेन्सी होल्डिंगलाई ब्याजको बदले उधारो दिन सक्नुहुन्छ, प्रश्नमा DeFi प्लेटफर्म को तरलता योगदान गर्न।
डिजिटल वालेटहरू: गैर कस्टोडियल DeFi क्रिप्टो वालेटहरूले तपाईंलाई सुरक्षित वातावरणमा तपाईंको सम्पत्तिहरू र निजी कुञ्जीहरूमा पूर्ण नियन्त्रण राख्न अनुमति दिन्छ।
विकेन्द्रीकृत एक्सचेन्जहरू: उत्तम DeFi प्लेटफर्मले तपाईंलाई बिचौलाको आवश्यकता हटाउन र यसको सट्टा स्मार्ट सम्झौता मार्फत व्यापारमा संलग्न गराउँछ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रोटोकोल: DeFi ले फ्रेमवर्क समर्थन गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लगानी उत्पादनहरूका लागि रकम पोखरी गर्न अनुमति दिन्छ जस्तै स्वचालित लगानीहरू र सम्पत्ति एग्रीगेटरहरू।
गैर जमानत ansण: DeFi ले तपाइँलाई पियर-टु-पियरको आधारमा असुरक्षित loansणहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाएको छ।
गैर-फन्गिबल टोकनहरू: सबै भन्दा राम्रो DeFi प्लेटफार्महरू बढ्दो NFTs को लागि समर्थन प्रस्ताव गर्दै छन्। यी टोकनहरू हुन् जसले तपाईंलाई सम्पत्तिलाई कमोडिफाई गर्न अनुमति दिन्छ जुन ब्ल्याकचेनमा पहिले गैर-ब्याजयोग्य थियो। यसले मूल कलाकृति, गीत, वा एक ट्विट समावेश गर्न सक्दछ।
उत्पादन फार्मिंग: यो DeFi उत्पादन तपाइँ लाई एक DeFi प्लेटफर्म मा राखेर तपाइँको क्रिप्टो सम्पत्ति मा ब्याज कमाउन सक्षम गर्दछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, DeFi उद्योगको क्षेत्र एकदम भिन्न छ। Y0u लगभग कुनै पनि वित्तीय सेवामा कल्पना गर्न सकिने स्पष्ट, सीमाहीन पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछ - बचत खाताहरू, loansण, ट्रेडिंग, बीमा, र अधिकबाट।
त्यसोभए तपाइँले यस क्षेत्रका सब भन्दा बढि सुविधाहरूमा पहुँच पुर्‍याउने उत्तम डेफाइ प्लेटफर्महरू कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ? तल, हामीले शीर्ष-मूल्या rated्कन गरिएका प्लेटफार्महरूको चयन समीक्षा ग .्यौं र कसरी तपाईं तिनीहरूबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
२०१ 2018 मा सुरू गरिएको, YouHodler बजार मा एक उत्तम मल्टि-फेस्ड क्रिप्टो ndingण प्लेटफर्म हो। यो मुख्य रूपमा एक क्रिप्टो फाइट वित्तीय सेवा हो जसले तपाईंलाई तपाईंको निक्षेपहरूमा उच्च-उपज वापसी प्रदान गर्दछ। DeFi प्लेटफर्मले यूरोप र स्विजरल्याण्डका सम्मानित बैंकहरूसँग साझेदारी गरेको छ तपाईंको डिजिटल सम्पत्तीहरूको सुरक्षित र सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित गर्नका लागि।
YouHodler एक ट्रेडिंग एक्सचेन्जको साथ एकीकृत पनि हुन्छ जुन धेरै प्रमुख DeFi सिक्काका लागि समर्थन प्रदान गर्दछ - कम्पाउन्ड, DAI, Uniswap, Chainlink, निर्माता, र अधिक सहित। YouHodler को सब भन्दा उल्लेखनीय सुविधाहरु मध्ये एक छ कि यो तपाईं Bitcoin, वा अन्य क्रिप्टोकरन्सी जम्मा गर्न को लागी अनुमति दिन्छ - सम्पत्ति मा तुरून्त ब्याज कमाउन को लागी।
यस प्लेटफर्ममा प्रत्येक उधारो र orrowण दिने सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी कागजात हो जुन यूरोपियन युनियनको दिशानिर्देशनहरूको अनुसरण गर्दछ। तपाइँ तपाइँको क्रिप्टो निक्षेपमा १२.12.7% कमाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि प्रतिफल तपाईले बनाउनुहुनेछ प्रत्येक हप्ता तपाइँको हड्लर वालेटमा सिधा जम्मा हुनेछ। यस बाहेक, तपाईं प्लेटफर्ममा क्रिप्टो loansणमा पनि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। YouHodler एक प्रभावी anण-देखि-मूल्य अनुपात शीर्ष २० क्रिप्टो करन्सीहरू समर्थनको लागि% ०% को प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईं अमेरिकी डलर, यूरो, स्विस फ्रान्क, र ब्रिटिश पाउन्ड जस्ता फिएट मुद्रामा पनि getण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यी instणहरू तुरून्त तपाईंको व्यक्तिगत बैंक खातामा वा क्रेडिट कार्डमा फिर्ता लिन सकिन्छ। जो DeFi क्रिप्टो बजार संग अधिक अनुभवी छन् को लागी, YouHodler ले अन्य दुई उत्पादनहरु पनि पेश गरेको छ - मल्टीहाडएल र टर्बोचार्ज। यी सुविधाहरूको साथ, प्लेटफर्मले तपाईंलाई अधिकतम रिटर्न प्राप्त गर्न बहु loansणमा तपाईंको सम्पत्ति स्वत: लगानी गर्ने छ।
यद्यपि, जोखिम समावेश गरी विचार गर्दै, यी कार्यक्षमताहरू अनुभवी लगानीकर्ताहरूको लागि उत्तम आरक्षित हुन्छन् जुन वित्तीय बजारको इन्स र आउटसँग परिचित छन्। अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ केवल तपाइँको क्रिप्टो सम्पत्तिहरूबाट निष्क्रिय आय कमाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तब YouHodler तपाइँलाई सुपर-उच्च रिटर्न प्राप्त गर्न सक्छ जबकि तपाइँ तपाइँको सम्पत्ति सुरक्षित ठाउँमा भण्डारण गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
नेक्सो क्रिप्टो स्पेसको अर्को प्रमुख नाम हो। मञ्चले क्रिप्टो सम्पत्तिहरूको साथ परम्परागत बैंकिंगलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने धेरै वित्तीय उत्पादनहरू सुरू गरेको छ। नेक्सोले तपाईंलाई १ different विभिन्न क्राइप्टो सम्पत्तिमा ब्याज कमाउन अनुमति दिन्छ - डीएआईआई र नेक्सो टोकन जस्ता डेफाइ सिक्का सहित। तपाईं क्रिप्टोकरन्सीहरूमा%% रिटर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र स्थिरकोइन्समा १२% सम्म।
तपाईंको आय दैनिक आधारमा तपाईंलाई भुक्तान गरिनेछ। थप रूपमा, तपाईं फिट मुद्राहरू पनि जोगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यूरो, अमेरिकी डलर, र ब्रिटिश पाउन्ड तिनीहरूलाई फिर्ता लिन। एक क्रिप्टो बचत खाता बाहेक, नेक्सोले तपाइँलाई डिजिटल डिजिटल सम्पत्ती कोलेटलाइ गरेर तत्काल loansण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रक्रिया पूर्ण स्वचालित छ - र तपाईं आफ्नो loanण अनुरोध प्रक्रिया को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कुनै क्रेडिट चेक मार्फत जानुभए बिना। नेक्सो क्रिप्टो loansणका लागि ब्याज दरहरू 5.90 ०% एपीआरबाट सुरु हुन्छ। न्यूनतम loanण रकम $ 50 मा सेट गरिएको छ, र तपाईं million २ लाख सम्म क्रेडिट लाइनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्सोले यसको आफ्नै देश क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज पनि स्थापित गरेको छ, जहाँ तपाईं १०० भन्दा बढि क्रिप्टोकरन्सी जोडीहरू किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ।
प्लेटफर्मले एक Nexo स्मार्ट प्रणाली बनाएको छ सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईले बजारमा सबै भन्दा राम्रो मूल्य पाउनुहुनेछ बिभिन्न एक्सचेन्जमा जडान गरेर। यसबाहेक, नेक्सोले यो पनि आश्वासन दिन्छ कि त्यहाँ न्यूनतम मूल्यको उतार चढाव हुन्छ जब तपाईं बजार अर्डर गर्नुहुन्छ। अन्य डेफाइ प्लेटफर्महरू जस्तै, नेक्सोले पनि यसको आफ्नै प्रशासन कोइन सुरू गर्यो - नेक्सो टोकन।
नेक्सो टोकन होल्ड गर्नाले तपाईंलाई प्लेटफर्ममा धेरै इनामको हकदार बनाउँदछ - जस्तै तपाईंको निक्षेपमा अधिक रिटर्न, र onणमा कम ब्याज दरहरू। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेक्सो केहि प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो जसले यसको टोकन होल्डरहरूलाई लाभांश दिन्छ। वास्तवमा, लगानीको आकार र अवधिमा निर्भर गर्दै - यस डेफाइ सिक्काको शुद्ध नाफाको %०% नेक्सो टोकन धारकहरू बीच वितरण गरिन्छ।
Uniswap व्यापक क्रिप्टोकरन्सी बजारमा निर्विवाद रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय DeFi प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। मञ्चले तपाईंलाई कुनै पनि ईथरियम-आधारित ERC-20 टोकन मेटामास्क जस्ता निजी वालेटहरू प्रयोग गरेर ट्रेड गर्न अनुमति दिन्छ। २०२० मा, युनिसपले 2020 billion अर्ब डलर ट्रेडिंग भोल्युमलाई समर्थन गर्‍यो - यसले क्रिप्टो संसारमा सबैभन्दा ठूलो विकेन्द्रीकृत विनिमय बनायो। यी संख्याहरू २०१ from देखि १,58,०००% माथि छन् - जसले डेफि फ्ल्याटफर्म एक बर्षमा मात्र आइपुग्यो भनेर दर्साउँछ।
Uniswap को एक मुख्य फाइदा भनेको यो छ कि तपाईंलाई आफ्नो सम्पत्ति प्लेटफर्ममा जम्मा गर्न आवश्यक छैन। अर्को शब्दहरुमा, यो एक गैर-कस्टोडिअल अनुप्रयोग हो जसले अर्डर पुस्तकहरूको सट्टा तरलता पूलहरू प्रयोग गर्दछ। तपाइँ Uniswap प्रोटोकल मा साइन अप गर्न को लागी कुनै KYC प्रक्रिया पूरा गर्न को आवश्यकता छैन।
तपाईं कुनै पनि ERC20 टोकन बीच बदल्न सक्नुहुन्छ वा तरलता पोखरीमा थपेर संकलित शुल्कको एक सानो प्रतिशत कमाउन सक्नुहुन्छ। हामीले पहिले नै संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरेझैं, Uniswap सँग आफ्नै युएनआई टोकन पनि छ - जुन तपाईंलाई प्रदायकको प्रोटोकल प्रशासनमा मतदान शेयरहरू प्रदान गर्न सक्दछ। DeFi सिक्का हालसालै मूल्यमा बढेको छ, UNI प्रोटोकलमा बढी ध्यान आकर्षित गर्दै।
भर्खरै, Uniswap ले यसको एक्सचेन्जको अन्तिम संस्करण पनि पेश गर्‍यो - Uniswap V3 नाम। यो केंद्रित तरलता र शुल्क तहहरूको साथ आउँछ। यसले तरलता प्रदायकहरूलाई उनीहरू लिने जोखिमको स्तर अनुरूप पारिश्रमिक प्रदान गर्दछ। त्यस्ता सुविधाहरूले Uniswap V3 एक धेरै लचिलो एएमएम डिजाइन गरिएको बनाउँछ।
युनिसप प्रोटोकलले कम स्लिपेज ट्रेड एक्जिक्युसन प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि राख्दछ जुन केन्द्रीकृत एक्सचेन्जलाई पार गर्न सक्छ। यी नयाँ अपडेटहरूले UNI DeFi टोकनको मूल्यलाई अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, DeFi प्लेटफर्म निरन्तर विकसित हुँदैछ र चाँडै नै अन्य उत्पादनहरू जस्तै क्रिप्टो loansण र यसको विकेन्द्रीकृत ईकोसिस्टममा leण दिन सक्छ।
२०१ in मा सुरू गरिएको, ब्लकफाइ तपाईंको डिजिटल सम्पत्ति बढाउन जाने ठाउँमा जानको लागि विकसित भएको छ। वर्षौंको अवधिमा, डेफिफाई प्लेटफर्मले उल्लेखनीय समुदायका आंकडाहरूबाट १$० मिलियन डलर प्राप्त गर्न, र निम्न वफादार ग्राहकहरूलाई प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। BlockFi दुबै व्यक्तिगत र संस्थागत cryptocurrency व्यापारीहरु मा लक्षित विभिन्न वित्तीय उत्पादनहरु प्रदान गर्दछ। BlockFi ब्याज लेखा, BIAS छोटो को लागी - तपाइँ लाई क्रिप्टोकरन्सीहरु मा वार्षिक on. 2018% को ब्याज दर अर्जित गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
अन्य DeFi प्लेटफर्महरू जस्तै। ब्लकफाईले यी प्रयोगकर्तालाई अन्य व्यक्तिहरू र संस्थागत दलालहरूलाई जम्मा गर्छ र उनीहरूमा ब्याज लिन्छ - जुन यसको परिप्रेक्षमा यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई भुक्तान गर्दछ। त्योले भन्यो, यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि प्रयोगकर्ता जम्मा कम्पनी इक्विटीको तुलनामा अधिक प्राथमिकता दिइन्छ जब यो ndingणको कुरा आउँछ।
ब्लकफाइले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो डिजिटल सम्पत्ति जमानतको रूपमा प्रयोग गर्न, र अमेरिकी डलरमा 50०% जमानत मानको लागि orrowण लिन अनुमति दिन्छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो अन्य प्लेटफर्महरू जस्तै YouHodler द्वारा प्रस्ताव गरिएको LTV भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ, almostणहरू लगभग तत्काल प्रक्रियामा हुन्छन्। अन्तमा, ब्लकफाइको अर्को फाइदा यो हो कि यसले आफ्नो प्लेटफर्ममा एक्सचेन्जको लागि एक निःशुल्क प्रदान गर्दछ।
जे होस्, विनिमय दरहरु तपाइँ अरू प्लेटफर्महरु मा प्राप्त हुन सक्छ तुलना गर्न कम इष्टतम छन्। समग्रमा, ब्लकफि एक अग्रणी वैकल्पिक वित्तीय सेवाहरु मध्ये एक को रूप मा यसको स्थिति हो - तपाईलाई असक्रिय आय आर्जन गर्न तपाईको डिजिटल सम्पत्ती को उपयोग गर्न को लागी, साथै यसको बिरूद्ध द्रुत loansण सुरक्षित गर्न।
मूल रूपमा ETHLend को रूपमा सुरू गरिएको, Aave बजारको रूपमा शुरू भयो जहाँ क्रिप्टो ndणदाताहरू र orrowण लिनेहरू तेर्सो पक्षको माध्यम बिना उनीहरूका सर्तहरू छलफल गर्न सक्दछन्। त्यसबेलादेखि डेफि प्लेटफर्म एक स्थापित डेफी प्रोटोकलमा बढेको छ जसले धेरै वित्तीय उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। Aave तरलता पूल वर्तमान मा 25 भन्दा बढी क्रिप्टो, स्थिर, र DeFi सिक्का को लागी समर्थन प्रदान गर्दछ।
यसमा DAI, चैनलिंक, Yearn.finance, Uniswap, SNX, निर्माता, र अधिक समावेश छ। थप रूपमा, Aave ले यसको आफ्नै शासन टोकन - AAVE पनि जारी गरेको छ। यसले टोकन धारकहरुलाई Aave प्रोटोकल को शासनको लागि योगदान गर्न सक्षम गर्दछ। AAVE टोकन ब्याजका साथै अन्य पुरस्कार कमाउन प्लेटफर्ममा स्ट्याक गर्न सकिन्छ।
Aave मुख्य रूप बाट s crypto- उधार प्लेटफार्म को रूप मा कार्य गर्दछ। तपाईं Aave मा विकेन्द्रीकृत तरीकामा डिजिटल सम्पत्ति उधार लिन र उधारो दिन सक्नुहुनेछ, कुनै पनि AML वा KYC कागजात पेश नगरी। एक nderणदाताको रूपमा, तपाइँ प्रभावी ढ effectively्गले तरलता पोखरीमा तपाईंको सम्पत्ति जम्मा गर्नुहुनेछ। पोखरीको एक अंशलाई डिफेई प्लेटफर्ममा अस्थिरता विरूद्ध रिजर्वको रूपमा छुट्याइनेछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तरलतालाई असर नगरी आफ्नो रकम फिर्ता लिन सजिलो बनाउँदछ।
यसबाहेक, तपाईं प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउनुभएको तरलताको लागि रूचि प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाईं loanण लिन चाहनुहुन्छ भने, Aave ले तपाईंलाई तपाईंको सम्पत्ति overcollateralization द्वारा izingण लिन अनुमति दिन्छ। तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको ofणको LTV सामान्यतया to० देखि% 50% बीचमा हुन्छ।
यद्यपि यस बाहेक, अवेले अन्य अद्वितीय उत्पादनहरू पनि प्रस्तुत गर्दछन - जस्तै असुरक्षित क्रिप्टो loansण र दर स्विचिंगको रूपमा। हामी यसलाई विस्तृत रूपमा यस गाईडको 'डीएफआई प्लेटफर्महरूमा क्रिप्टो ansण' मा छलफल गर्नेछौं। जे होस्, such अद्वितीय जमानत का प्रकार Aave लाई DeFi क्षेत्र मा ट्र्याक्शन प्राप्त गर्न को लागी अनुमति छ। वास्तवमा, यस अन्तरिक्षमा अन्य DeFi प्रोटोकोलको तुलनामा, Aave ले सुविधाहरूको एक अद्वितीय शस्त्रागार प्रस्ताव गर्दछ।
सेल्सियस अर्को ब्लकचेन-आधारित प्लेटफर्म हो जुन आफ्नै आफ्नै टोकन विकसित गर्दछ। CEL टोकन सेल्सियस इकोसिस्टमको मेरुदण्ड हो। यो ERC-20 टोकन यसको वित्तीय उत्पादनहरु बाट तपाईको फाईदा अधिकतम गर्न सेलसियस प्रोटोकोल भित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपयोगिताको सर्तमा, सेल्सियसले तपाईंलाई तपाईंको क्रिप्टो सम्पत्तिमा ब्याज कमाउन अनुमति दिन्छ, ब्याज दर १ 17.78% सम्म। यो राम्रोसँग उद्योग औसत भन्दा माथि छ - तथापि, तपाईले CEL टोकन राख्नु पर्छ यो उच्च फिर्ता प्राप्त गर्न। सेल्सियसले तपाईंलाई फिएट मुद्रा वा अन्य डिजिटल सम्पत्ति उधार लिनको लागि जमानतको रूपमा क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
फेरी, यहाँ ब्याज दर अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धी हो - १% APR मा मात्र सेट। यो प्रोभिसोमा छ कि तपाईंसँग पर्याप्त CEL टोकनहरू प्लेटफर्ममा स्टेक छन्। साधारण शब्दहरूमा, तपाईले प्लेटफर्ममा प्राप्त गर्नुहुने लाभहरू तपाईले CEL मा रोक्ने भारीमा निर्भर हुन्छन्। त्यस्तै, यदि तपाईं सेल्सियस प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो एक राम्रो विचार हो CEL तपाईंको cryptocurrency पोर्टफोलियोमा जोड्न।
सबै पछि, ती पनी ती र हिस्सेदारी CEL टोकनहरु आफ्नो निक्षेप मा अधिक रिटर्न, साथै loansण मा कम ब्याज दर प्राप्त गर्न सक्छन्। पुँजीगत नाफाको सन्दर्भमा, २०२१ को सुरुवातदेखि नै सीईएल टोकनको मूल्य २०% बढेको छ। यद्यपि यो कुरा याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सीएलई टोकनको उपयोगिता सेल्सियस इकोसिस्टम बाहिर सीमित छ।
कम्पाउन्ड फाइनान्स सजिलैसँग डेफि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो leण दिने प्रोटोकोलको रूपमा मान्न सकिन्छ। आज छलफल गरिएको अन्य DeFi प्लेटफर्मको बहुमतसँगै, कम्पाउन्ड प्रोटोकल Ethereum blockchain मा निर्मित छ। यद्यपि यो प्रारम्भमा केन्द्रीकृत भएको थियो, यसको गभर्नन्स टोकन को सुरूवातको साथ, कम्पाउन्डले समुदाय संचालित विकेन्द्रीकृत संगठन बन्नको लागि आफ्नो पहिलो केहि कदमहरू उठाइरहेको छ।
लेखनको समयमा, कम्पाउन्डले १२ क्रिप्टो र स्थिर सिक्का समर्थन गर्दछ - जसमा प्रमुख DeFi टोकनहरू पनि समावेश छन्। कम्पाउन्डमा क्रिप्टो ndingण दिने सुविधा अन्य डेफाइ प्लेटफर्महरूमा उस्तै कार्य गर्दछ। एक nderणदाता को रूप मा, तपाईं सक्नुहुन्छ कमाई प्लेटफर्ममा तरलता थपेर तपाईंको कोषहरूमा रुचि। जबकि एक rण लेनेवाला को रूप मा - तपाईं द्वारा loansण मा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भुक्तानी चासो।
यद्यपि, सम्पूर्ण राजकुमारी एक नयाँ उत्पादको माध्यमबाट cToken करार भनिन्छ। यी अन्तर्निहित सम्पत्तिहरूको EIP-20 प्रतिनिधित्व हुन् - जुन तपाईंले जमा गर्नुभएको र फिर्ता गरेको सम्पत्तिको मूल्य ट्र्याक गर्छ। कम्पाउन्ड प्रोटोकोलको कुनै लेनदेन सी टोकन सम्झौताको माध्यमबाट हुन्छ। तपाईं ब्याज कमाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र lateण प्राप्त गर्न जमानतको रूपमा। तपाईं या त 'टकसाल' cTokens मा तपाइँका हातहरू लिन वा यिनीहरू कम्पाउन्ड प्रोटोकल मार्फत लिन सक्नुहुन्छ।
कम्पाउन्डले एक जटिल एल्गोरिथ्मलाई पनि रोजगार दिउँदछ जुन प्लेटफर्ममा ब्याज दरहरू परिभाषित गर्दछ। त्यस्तै, अन्य DeFi प्लेटफार्महरू विपरीत, ब्याज दर परिवर्तनशील छ - प्रोटोकल भित्र आपूर्ति र माग मा निर्भर गर्दछ। यसको प्रशासन टोकन COMP मार्फत - पूर्ण विकेन्द्रीकरण प्राप्त गर्न कम्पाउन्ड योजनाहरू। यो मतदानको अधिकार प्रदान गरेर र यसको DeFi प्लेटफर्ममा COMP धारकहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेर गरिन्छ।
मेकरडाओ पहिलो डिफाइ प्लेटफर्म हो जसले क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूको आँखा लिएको छ। प्रोजेक्ट २०१ 2017 मा शुरू भयो र विकेन्द्रीकृत डिजिटल भोल्ट प्रणालीको रूपमा कार्य गर्दछ। तपाईं Ethereum- आधारित क्रिप्टोकरन्सीहरूको संख्या जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र प्लेटफर्मको नेटिभ टोकन टकसाल गर्न प्रयोग गर्नुहोस् - DAI। हामीले माथि उल्लेख गरेझैं DAI को मान अमेरिकी डलरको दर्पण हो। तपाइँले निर्माता DADO मा उत्पन्न DAI colण लिनको लागि जमानतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जे होस्, सम्झनुहोस् कि DAI को बदलामा तपाईको ERC-20 टोकन साट्ने प्लेटफर्ममा नि: शुल्क छैन। जब तपाइँ एक घर खोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई एक मेकर शुल्क चार्ज गरिनेछ। यो शुल्क समय-समयमा सावधान हुन सक्छ र स्वत: प्लेटफर्ममा अपडेट हुनेछ। यस कारणका लागि, यदि तपाईं मेकर वाल्टहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो उत्तम हो कि तपाईको संपार्श्वीकरण दर यथासक्दो उच्च राख्नुहोस् - तरलताबाट बच्न।
निर्माता DDAO इकोसिस्टम बाहिर DAI ले कुनै पनि अन्य DeFi सिक्काको रूपमा कार्य गर्दछ। तपाईं यसलाई ndण ​​दिन सक्नुहुन्छ, वा यसलाई निष्क्रिय आय कमाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हालसालै DAI ले यसको कार्यक्षमता बढाइसकेको छ NFT खरीदहरू, गेमि plat प्लेटफर्ममा एकीकरण, र eCommerce व्यवसायहरू। DAI बाहेक, MakerDAO सँग अतिरिक्त प्रशासन मुद्रा छ - निर्माता। अन्य डेफाइ सिक्काहरू जस्तै, होल्डिंग मेकरले तपाईंलाई मतदान अधिकार र प्लेटफर्ममा कम शुल्कमा पहुँच दिनेछ।
माथि छलफल गरिएका प्लेटफर्महरूले आज निर्माण भइरहेको विशाल डेफि नेटवर्कको झलक प्रस्तुत गर्दछ। यो जान्छ, DeFi क्षेत्र को भविष्य यसको पछाडि समुदाय द्वारा निर्धारित गरिनेछ। यदि उद्योगले अझ बढी ध्यान आकर्षण गर्न जारी राख्यो भने, यो सम्बन्धित DeFi सिक्काको मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, डेफिको विश्वले वित्तीय क्षेत्रमा क्रान्ति ल्यायो। यी शीर्ष डेफी प्लेटफार्महरू ब्लकचेन टेक्नोलोजीको लाभ उठाएर उद्योगलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्छन्। बदलेमा, तपाईं पारदर्शितामा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको सम्पत्तिमा राम्रो नियन्त्रण।
यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि डेफिको भविष्यमा हावी हुन सक्ने ठूलो सम्भावना छ, एउटा उत्तम चाल बनाउनका लागि एउटा डेफि फाइ सिक्कामा लगानी गर्नु हो। ती जो क्राइप्टोकुरोन्सी स्पेसमा नयाँ छन्, तपाईले यस क्षेत्रमा दिशाहरूबाट केही फाइदा लिनुहुनेछ। तसर्थ, हामीले तलको अनुभागमा सबै भन्दा राम्रो डेफाइ सिक्काहरू कसरी खरीद गर्ने भन्ने बारे गाइड राख्यौं।
DeFi Coins कसरी किन्नुहोस्
अहिले, यो आशा छ कि तपाईंसँग डेफि फाईल प्लेटफर्महरू के हुन्, र कुन डेफाइ सिक्का हाल मार्केटमा प्रभुत्व जमाउँदैछन् भन्ने बारे तपाईंसँग दृढ विचार छ। तपाईका छनौट गरिएका डेफिफाई सिक्का सुरक्षित र सबैभन्दा मूल्यवान ढ manner्गले किन्न सकिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न - तल हामी तपाईंलाई प्रक्रिया चरण चरणमा हिड्दछौं।
चरण १: एक नियमित अनलाइन ब्रोकर छनौट गर्नुहोस्
विकेन्द्रीकृत प्लेटफर्मले तपाईंलाई डिजिटल सम्पत्तिमा निषेधित पहुँच दिन्छ। जे होस्, जो आफ्नो लगानी संग बढी सतर्क हुन चाहान्छन्, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले हेर्नु पर्छ विनियमित प्लेटफार्महरू। उदाहरण को लागी, तपाईलाई DeFi सिक्का किन्न को लागी दुई तरिकाहरू छन् - एक cryptocurrency मार्फत विनिमय, वा एक अनलाइन मार्फत दलाल.
यदि तपाईं केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग फिएट मुद्राको सट्टा डेफाइ सिक्का किन्न सक्षम हुने सुविधा छैन। यसको सट्टामा, तपाईले स्थिर सिक्का जस्तै यूएसडीटीको लागि सेटल गर्न पर्छ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ क्यापिटल.com जस्ता नियमित अनलाइन ब्रोकर छनौट गर्नुहुन्छ भने - तपाई डेफी सिक्का व्यापार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र युएस डलर, यूरो, ब्रिटिश पाउन्ड, र अधिकको साथ तपाईको खातामा सजीलै कोष गर्न सक्नुहुनेछ।
वास्तवमा तपाईले डेबिट / क्रेडिट कार्ड र Paypal जस्ता ई-वालेटको साथ तुरून्त पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ।
अनजान व्यक्तिहरूको लागि, क्यापिटल.कम एक अत्यन्त लोकप्रिय CFD ट्रेडिंग प्लेटफर्म हो जुन युकेमा एफसीए र साइप्रसमा साइसेक दुबै द्वारा विनियमित छ।
प्लेटफर्मले DeFi सिक्का बजारहरूको एक लामो लाइन समर्थन गर्दछ - जस्तै LINK, UNI, DAI, 0x, र हिप्स अधिक।
जे होस्, यदि तपाइँको छनौट गरिएको अनलाइन ब्रोकरले इन-बिल्ट वालेट सेवा प्रदान गर्दैन भने, तपाइँ तपाइँको DeFi टोकनहरू भण्डारण गर्न बाह्य डिजिटल वालेट पनि फेला पार्न चाहानुहुन्छ। निस्सन्देह, यदि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि डेफाइ प्लेटफर्महरूमा निष्क्रिय आय कमाउनको लागि राख्नुहुन्न भने।
चरण २: तपाईको छनौट गरिएको DeFi ट्रेडिंग साइटको साथ साइन अप गर्नुहोस्
DeFi सिक्का ट्रेडिंग प्लेटफर्मको साथ खाता खोल्नु पहिले भन्दा सजिलो छ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको द्रुत दर्ता फारम भर्नु हो। यसले तपाईंको पूरा नाम, जन्म मिति, आवासीय ठेगाना, र सम्पर्क विवरण समावेश गर्दछ। त्योले भन्यो, यदि तपाई एक नियमित प्लेटफर्म जस्तै Capital.com प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ - तपाईले केवाईसी प्रक्रियाको भागको रूपमा तपाईको पहिचान पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
तपाईं परिचयको प्रमाण अपलोड गरेर यो चरण धेरै चाँडै पूरा गर्न सक्नुहुन्छ - जस्तै तपाईंको राहदानी वा ड्राइभर इजाजतपत्रको प्रतिलिपि। क्यापिटल डॉट कॉममा तपाईंसँग यो चरण पूरा गर्न १ days दिन हुनेछ। यदि तपाईं यसो गर्न असफल हुनुभयो भने, तपाईंको खाता स्वचालित रूपमा निलम्बित हुनेछ। एकचोटि कागजातहरू अपलोड र प्रमाणित भएपछि, तपाईं दर्जनौं डेफिफाई बजारहरूमा निष्खोट हुनुहुनेछ - सबै एक कमिशन-मुक्त आधारमा!
चरण:: तपाईंको अनलाइन खातामा फन्ड गर्नुहोस्
तपाईंले क्यापिटल.कमा डेफि फाइ सिक्का ट्रेड गर्नु अघि, तपाईंले आफ्नो खातामा कोष जम्मा गर्नुपर्नेछ।
क्यापिटल डॉटमा, तपाई यो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक तार स्थानान्तरण, वा एप्पलपे, पेपैल, र विश्वस्त रूपमा इलेक्ट्रॉनिक वालेट प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो, क्यापिटल.com कुनै पनि निक्षेप शुल्क चार्ज गर्दैन र तपाईं आफ्नो खाता मात्र $ / £ २० कोषमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हो भने, यदि तपाईं बैंक स्थानान्तरण मार्फत कोष जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले न्यूनतम $ / £ थप्न पर्छ २०
चरण:: तपाइँको छनौट गरिएको DeFi सिक्का बजार खोज्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले आफ्नो खाता सेट अप गर्नुभयो, तपाईं डेफाइ सिक्का व्यापार सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ। Capital.com मा - प्रक्रिया सरल छ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा तपाईको छनौट गरिएको डेफाइ सिक्काको खोजी गर्नु हो र परिणाम क्लिक गर्नुहोस् जुन लोड हुन्छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ Uniswap को व्यापार गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई सजिलै खोज पट्टीमा 'UNI' प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण:: ट्रेड DeFi Coins
अब, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको DeFi टोकनको मात्रा निर्दिष्ट गर्नु हो जुन तपाईले व्यापार गर्न चाहानुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं प्रश्नमा डेफी सिक्कामा जोखिम उठाउन चाहानु भएको पैसाको मात्रा पनि प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
जे भए पनि, एक पटक तपाईले अर्डर पुँजी गर्नुभयो Capital.com मा - यो तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेछ। सबै भन्दा उत्तम - क्यापिटल.कमले तपाईलाई डेफी सिक्का ट्रेड गर्न शुल्क वा शुल्कमा एक प्रतिशत लिने छैन!
एकचोटि तपाईंले आफ्नो वित्तीय लक्ष्यहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो डेफाइ सिक्का किन्नुभयो, त्यहाँ टेबलमा धेरै विकल्पहरू छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले उनीहरुलाई समात्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरुलाई ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ वा सम्बन्धित DeFi प्रोटोकलमा पुन: निवेश गर्नुहोस्। थप रूपमा, हामीले यस मार्गनिर्देशनमा छलफल गरेका छौं - तपाईले स्टिफ डेफाइ सिक्का पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ वा तिनीहरूलाई जमानतको रूपमा प्रयोग गरेर loansण लिन सक्नुहुन्छ।
महत्वपूर्ण रूपमा, डेफिफाई प्लेटफार्महरू बजारमा पहिले नै पर्याप्त उत्साह उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। विकेन्द्रीकृत अन्तरिक्षले गत १२ महिनामा मात्र लगानी पूंजीको एक प्रभावशाली रकम आकर्षित गरेको छ - वर्षको अवधिमा तीब्र गतिमा। तपाईंले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ प्लेटफर्महरू छन् जुन डेफिको माथि उल्लिखित सुविधाहरू सर्वसाधारण जनतामा ल्याउनका लागि व्यवस्थित छन्।
धेरै प्रयोग केसहरू मध्ये, त्यहाँ विशेष गरी दुईवटा पक्षहरू छन् जुन क्रिप्टो लगानीकर्ता र एकैसाथ ट्रेडरहरूबीच कर्षण प्राप्त भएको छ। यी क्रिप्टो बचत खाताहरू र DeFi प्लेटफर्महरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको क्रिप्टो loansणहरू हुन्।
त्यस्तै, यस गाइडको अर्को सेक्सनमा, हामी यी अनुप्रयोगहरू हेर्नेछौं, र कसरी तपाईं आफ्नो क्रिप्टो सम्पत्ति बढाउन तिनीहरूको लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
डेफाइ प्लेटफर्महरूमा क्रिप्टो बचत खाताहरू
हामीले पहिले नै छलफल गरेझैं उत्तम DeFi प्लेटफर्ममा क्रिप्टो उत्साहीहरूका लागि थुप्रै वित्तीय उत्पादनहरू लाइनमा छन्। सबै फरक सम्भावना मध्ये, एक क्राइप्टो बचत खाता को विचार सबै भन्दा ध्यान प्राप्त गरिरहेको छ। एक क्राइप्टो बचत खाता भनेको जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ - यसले तपाईंलाई तपाईंको लगानीहरूमा निष्क्रिय प्रतिफल कमाउन अनुमति दिन्छ।
यद्यपि, परम्परागत वित्तीय प्रणालीको तुलनामा, उत्तम डेफाइ प्लेटफर्महरूले तपाईंलाई तपाईंको निक्षेपमा ब्याजको धेरै उच्च दर प्रस्ताव गर्दछ। तपाईंले क्रिप्टो बचत खातामा लगानी गर्ने निर्णय गर्नु अघि, यो उद्योगले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
क्रिप्टो बचत खाताहरू के हुन्?
क्राइप्टो बचत खाताहरू केवल टिनमा के भन्छन् - तपाईंको क्रिप्टो मुद्राको लागि बचत खाता। परम्परागत बैंकमा फिएट मुद्रालाई जम्मा गर्नुको सट्टा, तपाईले आफ्नो क्रिप्टो सम्पत्ति डेफाइ ndingण दिने प्लेटफर्ममा थप्नुहुनेछ। बदलामा, तपाईं आफ्नो निक्षेपमा ब्याज कमाउन सक्नुहुनेछ।
अनिवार्य रूपमा, तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहि प्लेटफर्मको क्रिप्टो उधारोकर्तालाई तपाइँको सम्पत्ति उधारो दिइरहेको छ। बदलामा, तिनीहरूले तपाईंको क्रिप्टो सम्पत्ति उधारो लागि ब्याज तिर्न। त्यस्तै, क्रिप्टो बचत खाताहरूले सर्वश्रेष्ठ डेफी प्लेटफार्महरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको पियर-टु-पियर loansणहरू फन्ड गर्न सहयोग गर्दछ।
DeFi लेन्डिंग प्लेटफार्महरू
सामान्यतया, केन्द्रीकृत ndingण प्लेटफर्ममा - तपाईले एउटा बचत खाताको फाइदा लिन बोझिल केवाईसी प्रक्रियामा जानु पर्छ। यसबाहेक, प्रस्ताव गरिएको ब्याज दरहरू कम्पनीले नै निर्धारण गर्नेछ। अर्कोतर्फ, डेफिफाई प्लेटफार्महरू प्रोटोकोलको रूपमा सञ्चालन गर्दछन् - यसको अर्थ तिनीहरू कुनै पनि केवाईसी प्रक्रियाहरूसँग पालना नगरीकन सबैको लागि पहुँचयोग्य हुन्छन्।
त्यो मात्र होईन, तर खाताहरू गैर-व्यावसायिक हुन्, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले आफ्नो फण्डहरू प्लेटफर्ममा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्दैन। त्यस्तै, विकेन्द्रीकृत ndingण प्लेटफार्महरू र उनीहरूले बचत गर्ने खाताहरू स्वचालित हुन्छन्। यसको मतलब यो छ कि शासन प्रणालीले ब्याज दरहरू निर्धारण गर्दछ।
धेरै जसो केसहरुमा, उत्तम DeFi उधारो प्लेटफार्महरु को ब्याज दरहरु को लागी सम्बन्धित प्रोटोकल मा एक आपूर्ति को लागी आपूर्ति र मांग मा आधारित छ। यसबाहेक, एक orण लिने व्यक्तिले DeFi प्लेटफर्म मार्फत loanण लिन सक्दछ - एक प्रमाणिकरण प्रक्रिया वा क्रेडिट जाँचको माध्यम बिना नै।
यस गाइडको अर्को खण्डमा detailण लिनेको दृष्टिकोणबाट क्रिप्टो inणको विषयमा हामी विस्तृत रूपमा कभर गर्दछौं। जे होस्, पछिल्ला केहि बर्षहरूमा, डेफी ndingण दिने विचार महत्वपूर्ण बृद्धि भएको छ। यद्यपि यो सम्भावित रूपमा उधारकर्ताहरूको लागि उच्च ब्याज दरको साथ आउँदछ, कुनै प्रमाणिकरणको सुविधाले डेफिफा प्लेटफर्महरूलाई बढी आकर्षक बनाउँदछ - विशेष गरी उनीहरूलाई खराब क्रेडिट रेटिंग भएको मानिन्छ।
DeFi लेन्डिंग कसरी काम गर्दछ?
सबै भन्दा राम्रो डेफाइ प्लेटफर्महरूमा, तपाईं शब्द 'उपज खेती' पनि आउँनुहुनेछ - जसले ब्याज कमाउनको लागि ERC-20 टोकनको स्टेकिंगलाई जनाउँछ। धेरै केसहरूमा, क्रिप्टो बचत खाताहरू र उपज खेती यति फरक हुँदैन। त्यो भनेको सँगै, जब तपाईं डेफि प्लेटफर्मको माध्यमबाट जानुहुन्छ, तपाईं तरलता प्रदायकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो, जब तपाईं आफ्नो रकम जम्मा गर्नुहुन्छ, तिनीहरू तरलता पोखरीमा थपिनेछन्।
यो तरलता प्रदान गर्न बदलामा, तपाईले ब्याज सर्तमा इनाम पाउनुहुनेछ।
विकेंद्रीकृत ndingण प्लेटफार्महरू स्वचालित प्रोटोकलहरूको सेटमा चले।
उदाहरण को लागी, उत्तम DeFi प्लेटफार्मों जस्तै कम्पाउन्ड र Aave आफ्नो कागजात बनाएको छ - जो कोहीको लागि पहुँच को लागी उपलब्ध छ।
त्यस्ता डेफाइ प्लेटफर्महरूमा सबै लेनदेन स्मार्ट सम्झौताहरू (तरलता पूलहरू) मार्फत गरिन्छ।
यो सुनिश्चित गर्दछ कि उधारो र उधारो प्रक्रिया को सही तरीकाले ह्यान्डल गरिएको छ। स्मार्ट सम्झौता लेनदेन मात्र कार्यान्वयन गर्दछ यदि प्लेटफर्म द्वारा निर्दिष्ट पूर्व निर्धारित शर्तहरु पूरा गरीएको छ। त्यस्तै रूपमा, जब तपाईं डेफाइ बचत खाता खोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईं मूल रूपमा स्मार्ट सम्झौताको लागि पूँजी पठाउँदै हुनुहुन्छ।
बदलामा, तपाईं डिजिटल टोकन वा बॉन्डको रूपमा प्रतिफल कमाउनुहुनेछ जुन प्रमाणित गर्दछ कि तपाईं सम्बन्धित सम्पत्तिको मालिक हुनुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो डेफाइ प्लेटफर्महरूमा, यी स्मार्ट सम्झौताहरू राम्ररी अडिट छन् र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। जहाँसम्म, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ - डाटा प्रमाणिकरण गर्न तपाईंलाई कोडिंग ज्ञानको एक बिट चाहिन्छ।
आज, तपाई एक क्राइप्टो बचत खाता मात्र खोल्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले धेरै ERC-20 टोकन र स्थिरकोइन्समा पनि ब्याज कमाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए, के तपाईले डेफि प्लेटफर्ममा क्रिप्टो बचत खाता खोल्नु पर्छ? ठिक छ, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एक क्राइप्टो बचत खाता खोल्नुको मुख्य फाइदा भनेको ब्याज प्राप्त गर्नु हो। तपाईको वालेटमा तपाईको डिजिटल सम्पत्ति मात्र भण्डारण गर्नुको सट्टा तपाई तपाईले दिनु भएको भन्दा बढी क्रिप्टो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण रूपमा, तपाईंले औंला उठाउनु पर्ने छैन - किनकि तपाईको रिटर्नहरू तपाईंलाई निष्क्रिय आधारमा भुक्तानी गरिनेछ।
यद्यपि, आजका दिन धेरै लगानीकर्ताहरू DAI जस्ता स्थिर कोइन्ड्स दिन छनौट गर्दछन्। यसले तपाईंलाई पारंपरिक क्रिप्टोकुरेन्सीहरूमा संलग्न अस्थिरता जोखिम बिना तपाईंको पूंजी बढ्न अनुमति दिनेछ। यसका अलावा, धेरै डेफाइ प्लेटफर्महरूले तपाईंलाई तिनीहरूको आफ्नै प्रशासन टोकन शेयर गर्न अनुमति दिन्छ।
क्रिप्टो बचत खाताहरू व्यवहारमा कसरी काम गर्छन् भनेर बुझ्न मद्दतको लागि, हामीले तल एउटा उदाहरण सिर्जना गरेका छौं जुन सबै महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेट्छ।
मानौं तपाईं आफ्नो ईथरियम होल्डिंगको लागि क्रिप्टो बचत खाता खोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ।
तपाइँ तपाइँको क्रिप्टो बचत खाता सेट अप गर्न को लागी तपाइँ छनौट गरिएको DeFi प्लेटफर्ममा जानुहुन्छ।
तपाईंको DeFi प्लेटफर्मलाई तपाईंको cryptocurrency वालेटमा जडान गर्नुहोस्।
Coinsण दिन उपलब्ध समर्थित सिक्काको सूचीबाट Ethereum चयन गर्नुहोस्।
मञ्चले तपाईंलाई आफ्नो रुचिमा कति रुचि प्राप्त गर्दछ देखाउँदछ।
तपाईले भाग लिन चाहानुहुन्छ कति Ethereum चयन गर्नुहोस्।
जब तयार हुन्छ - लगानीको पुष्टि गर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि धेरै प्लेटफर्महरूमा, त्यस्ता लेनदेनहरूले तपाईंलाई ग्यास शुल्क तिर्नेछ। त्यस्तै रूपमा, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो क्रिप्टो बचत खाता सेट अप गर्नु अघि तपाईंको लागतहरू जाँच गर्नुहुन्छ। अब, जसरी हामीले माथि छोइसकेका छौं - जब तपाईं क्रिप्टोकरन्सीहरू राख्नुहुन्छ, तपाईं मूल रूपमा क्रिप्टो nderणदाताको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ।
यी DeFi प्लेटफर्महरू धेरै क्रिप्टो offerण पनि प्रदान गर्दछ - अरूहरूलाई तपाईंको सम्पत्ति उधार लिनको लागि अनुमति दिँदै। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो डिजिटल सम्पत्ति जोगाउनु हुनेछ बचत खातामा जम्मा गर्नुको सट्टा।
तलको सेक्सनमा, हामी कसरी व्याख्या गर्छौ तपाईले उत्तम डेफाइ प्लेटफर्महरूमा क्रिप्टो .णबाट कसरी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
DeFi प्लेटफार्महरूमा क्रिप्टो ansण
यदि तपाईं एक क्रिप्टो उत्साही हुनुहुन्छ, तपाईं पहिले नै 'किन्नुहोस् र समाउनुहोस्' रणनीतिको अवधारणासँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ। सरल रूपमा राख्नुहोस्, जब तपाईं आफ्नो डिजिटल सम्पत्ति 'होडलिंग' गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई सुरक्षित वालेटमा सुरक्षित राख्नुहुन्छ - जबसम्म तपाईं नगद तयार नहुनुभयो। जहाँसम्म, यो जान्छ, तपाईं केवल आफ्नो सिक्का एक वालेट मा वरिपरि बसिरहेका छन्।
क्राइप्टो ndingण र platण प्लेटफार्महरूले यसको लागि वैकल्पिक समाधान प्रस्ताव गर्दछ - जहाँ तपाईं बदलामा loanण प्राप्त गर्न तपाईंको क्रिप्टो सम्पत्तिलाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य शब्दहरूमा, क्रिप्टो loansणले बचत खाताहरूको विपरित रूपमा काम गर्दछ। तपाईं एक nderणदाता भएकोले र आफ्नो सम्पत्तिमा ब्याज कमाउनुको सट्टा, तपाईं cryण प्राप्त गर्न जमानतको रूपमा तपाईंको क्रिप्टो मुद्राहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
क्रिप्टो Whatण के हो?
कुनै पनि प्रकारको लगानीको लागि तरलतामा पहुँच एक मुख्य विचार हो। अर्को शब्दहरु मा, यो उत्तम हो कि कुनै पनि बिंदु मा आफ्नो सम्पत्ति नगद बाहिर सक्षम हुनु। जे होस्, परम्परागत धितोहरूको विपरीत, क्रिप्टोकुरेन्सी बजार केही फरक छ।
हामीलाई कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग १० बीटीसी छ, तर तपाईं केही तरलताको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
हालको बजारलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईं आफ्नो होल्डिंग बेच्न चाहनुहुन्न किनकि तपाईं BTC को मूल्य दीर्घ अवधिमा ठोस रूपमा बढ्ने आशा गर्नुहुन्छ।
त्यस्तै रूपमा, तपाईं आफ्नो क्रिप्टो अफलोड गर्न चाहनुहुन्न, किनकि जब तपाईं पछि त्यसको मितिमा फिर्ता किन्नुहुन्छ - तपाईं कम बिटकइनसँग समाप्त हुन सक्नुहुन्छ।
यो त्यहि हो जहाँ क्रिप्टो-उधारो प्लेटफार्महरू खेलमा आउँदछन्। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो बिटकइनलाई जमानतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिप्टो वा फिएट मुद्रामा भुक्तानी गरिएको receiveण प्राप्त गर्न। यद्यपि, क्रिप्टोकरन्सी सिक्काको अस्थिर प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईंले प्राप्त गरिरहनु भएको ofणको मूल्य भन्दा बढि बीटीसी जमानत गर्नु पर्नेछ।
Typically, त्यस्ता क्रिप्टो loansणहरूमा तपाइँले एक सीमान्त शुल्क पनि तिर्नु पर्छ। यो एक DeFi प्लेटफर्मबाट अर्कोमा फरक हुनेछ। उदाहरण को लागी, नेक्सो मा, तपाइँ केवल 5.9..4.5% APR बाट एक क्रिप्टो obtainण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जबकि blockFi मा, तपाईं interest.%% भन्दा कम ब्याज दरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
एक पटक तपाईले ब्याज सहित theण चुक्ता गर्नुभयो, तपाईको क्रिप्टो सम्पत्ति तपाईलाई फिर्ता गरिनेछ। तपाईंको क्राइप्टो निक्षेपहरू मात्र जोखिममा हुनेछ यदि तपाईं backण फिर्ता गर्न असफल हुनुभयो, वा तपाईंको जमानतको थोपाको मान। यस अवस्थामा, तपाईले अधिक जमानत थप गर्नुपर्नेछ।
क्रिप्टो loansणको एक मुख्य फाइदा यो हो कि तपाईं प्रमाणिकरण वा क्रेडिट जाँचको अधीनमा हुनुहुन्न। सामान्य शब्दहरूमा, परम्परागत बैंकि toको तुलनामा - क्रिप्टो ndingण दिन धेरै पहुँच योग्य छ। त्यस्तै रूपमा, तपाईंलाई तपाईंको क्रेडिट ईतिहास वा आयमा आधारित चेकहरूको अधीनमा पर्दैन। उत्तम DeFi प्लेटफर्मले तपाईंलाई youणका सर्तहरू निर्णय गर्न पनि अनुमति दिन्छ, तपाईंलाई अधिक लचिलोपन प्रदान गर्दै।
जमानत बिना DeFi क्रिप्टो ansण
जबकि केन्द्रीकृत क्रिप्टो प्लेटफर्मको बहुमत तपाईं जमानत राख्नको लागि आवश्यक छ, तपाईं पनि DeFi प्लेटफर्महरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई जम्मा नगरी loansण प्रदान गर्दछ। कुनै पनि सम्पत्ति यिनीहरूलाई मुख्य रूपमा असुरक्षित क्रिप्टो calledण भनिन्छ, जसले छोटो अवधिमा तरलता प्रदान गर्दछ।
उदाहरण को लागी, एक उत्तम DeFi प्लेटफार्मों - Aave, तपाईं फ्ल्यास loansणमा पहुँच दिन्छ - जहाँ तपाईं कुनै पनि जमानत प्रदान गर्न आवश्यक छैन। यसको सट्टामा, तपाईं सम्पत्तिहरू orrowण लिन सक्नुहुनेछ जबसम्म तपाईं एक ब्लकचेन लेनदेन भित्र backण फिर्ता गर्नुहुन्छ।
जे होस्, त्यस्ता असुरक्षित क्रिप्टो loansणहरू मुख्य रूपमा विकासकर्ताहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो किनभने तपाईले contractण अनुरोध गर्न स्मार्ट सम्झौता निर्माण गर्नुपर्नेछ, र उही लेनदेनमा फिर्ता भुक्तान गर्नुहोस्। त्यस्तै रूपमा, यदि तपाई क्रिप्टो loansणको फाइदा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ कुनै कोल्ट बिनाएरियल, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई कसरी प्रक्रियाको बारेमा कार्य गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ।
DeFi क्रिप्टो लेन्डिंग प्लेटफार्मों
जस्तो तपाईंलाई थाहा होला, सब भन्दा राम्रा DeFi प्लेटफर्म विकेन्द्रीकृत छन्, जहाँ ट्रान्जिसनहरू स्वचालित छन्, ब्यक्ति द्वारा ह्यान्डल गर्नु भन्दा। उदाहरण को लागी, AF र कम्पाउन्ड जस्तै DeFi प्रदायकहरु स्मार्ट अनुबन्धहरु रोजगार को लागी एल्गोरिदम प्रयोग कि स्वचालित loanण पेआउटहरु सिर्जना गर्न यसको प्रोटोकलमा चलाउँछन्।
यसबाहेक, यी प्रोटोकलहरू पूर्ण पारदर्शी हुन्छन् किनकि ती ब्लकचेनमा निर्मित छन्। केन्द्रीकृत प्लेटफर्मको विपरीत, त्यहाँ कुनै नियामक निकायहरू छैनन् - त्यसैले तपाईं सत्यापन प्रक्रिया पूरा नगरीकन क्रिप्टो loansणमा पहुँच पाउनुहुनेछ। थपको रूपमा, तपाईं क्रिप्टो loansण फिएट मुद्रा, DeFi सिक्का, वा स्थिर कोइन्स जस्तो कि USDT मा पाउन सक्नुहुन्छ।
डेफाइ क्रिप्टो ansण कसरी काम गर्दछ
धुंध हटाउनको लागि, हामीले कसरी एक क्रिप्टो loanण व्यावहारिक सर्तहरूमा काम गर्दछन् भन्ने उदाहरण सिर्जना गरेका छौं।
मानौं तपाईं एक BLC सिक्का जमानतको रूपमा एक crypto takeण लिन चाहनुहुन्छ।
तपाइँ UNI मा wantण चाहानुहुन्छ।
यसको मतलब यो हो कि तपाईंले एक यूएनआईको हालको मूल्य बीटीसीमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
हालको बजार मूल्यका अनुसार एक UNI लगभग ०००००0.00071284१२XNUMX। BTC बराबर छ।
तपाईंको छनौट क्रिप्टो प्रदायकले तपाईंलाई%% का ब्याज दर लगाउँछ।
दुई महिना पछि, तपाइँ theण फिर्ता र तपाइँको बिटकइन भुक्तान गर्न तयार हुनुहुन्छ।
यसको मतलब तपाईले युएनआईमा amountण रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ 5% ब्याजमा।
एकचोटि तपाईंले repण चुक्ता गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो बिटकॉइन जम्मा फिर्ता प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यस उदाहरणमा - तपाईले Bitcoin बेच्न तपाईले UNI मा तपाईको receivedण प्राप्त गर्नुभयो। लेनदेनको अर्को तर्फ, क्राइप्टो nderणदाताले उनीहरूको मूल यूएनआई, साथै%% ब्याज भुक्तानी प्राप्त गरे। त्योले भन्यो, यो महत्त्वपूर्ण छ क्रिप्टोकरन्सी बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्नु।
त्यस्तै रूपमा तपाईले अधिक संपार्श्विककरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, MakeDAO मा - तपाइँ तपाइँको ofण को मूल्य को कम्तिमा १ %०% को एक निक्षेप राख्नु पर्छ। त्यसो भए, मानिलिनुहोस् तपाईं UNI को १०० डलर मूल्य उधारो लिन चाहनुहुन्छ। MakerDAO मा - तपाईले $ १ worth को मूल्य BTC को जमानतमा जम्मा गर्नुपर्नेछ getण प्राप्त गर्नका लागि।
यदि बीटीसी निक्षेपको मूल्य $ १ below० भन्दा तल झर्छ, तपाईंले तरलता दण्ड तिर्नु पर्ने हुन सक्छ। जे होस्, डेफाइ स्पेसबाट तपाईलाई फाइदाको लागि क्रिप्टो loansण एक प्रभावकारी तरीका हुन सक्छ। यसले मात्र तरलतामा तत्काल पहुँच प्रदान गर्दैन तर परम्परागत वित्तीय सेवाहरूको माध्यमबाट जाने झन्झटबाट बचाउँछ।
सर्वश्रेष्ठ DeFi Coins - तल लाइन
अन्तिममा, डेफीको उद्योग लगातार विकसित हुँदै गइरहेको छ। थोरै समयमा, डेफिफाई प्लेटफार्महरू वित्तीय विश्वको एक प्रयोगात्मक हिस्साबाट विशाल इकोसिस्टममा बढ्नको लागि सफल भएको छ जुन आज छ। यद्यपि यो अहिले एउटा आला क्षेत्रको रूपमा देखा पर्न सक्छ, सम्भव छ कि डेफाइ अनुप्रयोगहरू व्यापक बजारले चाँडै अपनाईनेछ।
एकपटक घटना मूलधारमा हुन्छ, डेफिको विभिन्न पक्ष दैनिक जीवन र वित्त मा ट्रिक हुनेछ। अर्को शब्दहरुमा, DeFi को वित्तीय संसारमा बदल्न सक्ने सम्भाव्यता छ जुन हामी यो जान्दछौं।
यद्यपि यो दिमागमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि विकेन्द्रीकृत वित्त बजार अझै राम्रो छ। कुनै पनि अन्य लगानी जस्तै, यहाँ अझै सम्भावित जोखिमहरू छन्। त्यस्तै रूपमा, तपाईंले आफ्नो उचित परिश्रम र यो युवा वित्तीय प्रणालीको विकास भइरहेको छ भनेर अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सार्थक पाउनुहुनेछ।
DeFi के हो?
DeFi विकेन्द्रीकृत वित्त को अर्थ हो - जुन एक केन्द्रीय अधिकार छैन कि वित्तीय सेवाहरु को लागी एक शब्द हो। तपाईंलाई एक राम्रो विचार दिनको लागि, आज वित्तीय प्लेटफर्मको विशाल बहुमत एकल कम्पनी द्वारा चल्दछ। यसको तुलनामा, एक DeFi प्लेटफर्म blockchain मा बनेको गभर्नन्स प्रोटोकल द्वारा संचालित हो र क्रिप्टोकरन्सेस जस्ता विकेन्द्रीकृत सम्पत्ति प्रयोग गरेर चल्दछ।
DeFi को उपयोग के हो?
DeFi एक द्रुत बृद्धि क्षेत्र हो। आज, तपाई स्वचालित सेवाहरू प्रस्ताव गर्ने धेरै डिफाइ प्लेटफर्महरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यसले एक्सचेन्ज, ndingण, orrowण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, र अन्य संगठनहरू समावेश गर्दछ जुन कुनै एकल एकाइद्वारा नियन्त्रित हुँदैन।
DeFi टोकनहरू के हुन्?
धेरै DeFi प्लेटफार्महरु को लागी उनीहरुको आफ्नै मूल DeFi टोकन को शुरू गर्‍यो जुन यसको प्रोटोकल को सुशासन को लागी मद्दत गर्दछ। यी मूल टोकन धारकहरूले सम्बन्धित DeFi इकोसिस्टममा मतदान अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछन्।
सबै भन्दा राम्रो DeFi सिक्का के हो?
२० De२ को सुरुदेखि नै उत्कृष्ट डेफि टोकन लोकप्रियतामा बढेको छ। लेख्ने समयमा मार्केट क्यापिटलाइजेसनको सन्दर्भमा केहि राम्रा डेफी टोकनहरू युएनआई, लिंक, डीएआई, जेडआरएक्स, एमकेआर, सीएमपी, र केके समावेश गर्दछन्।
कसरी लगानी गर्न उत्तम DeFi सिक्का छनौट गर्ने?
कुनै पनि कारोबारयोग्य सम्पत्तिको रूपमा, यो अनुमान गर्न असम्भव छ कि कुन DeFi सिक्काले तपाईंलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्दछ। यद्यपि, तपाइँ DeFi बजार को बारे मा फरक फरक DeFi प्रोटोकलहरु र तिनीहरुको उपयोग को मामलाहरु को बारे मा सिकेर अझ राम्रो गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हाम्रो टोकन खरीद गर्नुहोस् "डेफाइ सिक्का" मार्फत हाम्रो सफ्ट सुरुवात!
DeFi Coin अब खरीद गर्नुहोस्DeFi Coin अब खरीद गर्नुहोस् अब भर्खरको ट्रेन्डिंग टोकन खरीद गर्नुहोस्!
DeFiCoins.io तपाइँलाई जानकारीपूर्ण ज्ञान प्रदान गर्न को लागी एक प्रयास हो जुन तपाइँ सही परियोजनामा ​​लगानी गरेर लागू गर्न र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।
DeFi Coins यसको पाठकहरूको लागि अप-टु-डेट डेफाइ बजारमा नवीनतम ट्रेन्डहरूको साथ राख्न समर्पित छ। हाम्रा पत्रकारहरू र अन्वेषकहरूले राम्ररी अनुसन्धान गर्छन् र तपाईंलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्दछन्।
DeFi क्षेत्र को भारी हाइप प्राप्त गर्दा, DeFi इकोसिस्टममा संचालित सबै टोकन गगनचुम्बीको रूपमा मानिन्छ। यो जहाँ हामी आउँछौं, हामी हाम्रा पाठकहरूलाई यस अवसरको अधिकतम लाभ लिन र टकसालको ठूलो मुनाफा दिन्छौं।
Bitcoin BTC यौगिक क्रीम वित्त गुप्त कर्भ वित्त ऋण विकेन्द्रीकृत टेक्नोलोजी Defi DEX इथेरियम निष्क्रिय वित्त आईआरएस पिज्जा Strelka वाल्ट्स UNI Uniswap Yearn.Finance Yearn.Finance मूल्य YFI YFI पतन
Deficoins.io प्रतिलिपि अधिकार © 2021।